तपाईँको पुनर्जन्म भएको थियो कि थिएन भनेर कसरि थाहा पाउने ? | Hulaki Online
2021 Feb 28, Sunday 07:13
तपाई नियम, कानुन या कुनै मानिसप्रति किन विद्रोह गर्नुहुन्छ? किनकी तपाईलाग्छ कि ती सत्य छैनन्, केवल सत्य झै बनाइएका छन्। तपाईको आत्माले ध्रुवसत्य के हो भनि चिन्छ। यो ब्रहमाण्ड सत्य हो, तपाईको जन्म सत्य हो, अनि तपाईको दुख सत्य हो। ‘मरिलानु केही छैन’ को अर्थ के हो? मरेर कता गइन्छ र! केही लिएर जानलाइ? मरेर तपाऐले अनुभव लिएर जानुहुन्छ। जुन तपाईको अर्को जन्मलाइ सहायक हुन्छ। सिकेर लगेका कुराले अर्को जन्मको भविष्य निर्धारण गर्छ। अहिलेको तपाईमात्र आफु हैन, पहिले पनि तपाई हुनुहुन्थ्यो, पछि पनि तपाईको जन्म हुनेछ, ती सबै एक हुन। तपाईको जीवन त केवल एउटा परिक्षा हो, एउटा जीवनको समाप्ती पछि परिक्षाफल आउछ अनि फेल भएको खण्डमा अर्को जीवनमा सुधर्ने मौका पाइन्छ। तपाईले जानेको कुरा सत्य छ अनि धेरैले असत्य बाटो रोजेका छन भने तपाईमा विद्रोहि विचार विकास हुन्छ। विद्रोह बिना जीवन परिवर्तन हुदैन तर विद्रोह असत्य कुरामा अडिएको छ भने तपाईले ठुलो भुल गर्दैहुनुहुन्छ।
जन्मनु भयो, पढ्नु भयो, काम गर्नु भयो, परिवारिक जीवन व्यतित गर्नुभयो, सन्तानको सुख हेर्नुभयो, बुढेसकालको दुख भोग्नुभयो अनि अन्तमा संसार छोडिन्छ, शरिरले साथ नदिएर। के गर्नुभएको त उल्लेखनिय, के गर्नु भयो आफ्नो लागि अनि के छोडेर जानुहुन्छ अन्यको लागि? मानव जीवनको उद्धेश्य केवल खानपिन अनि रमाइलो मात्र होला त? शारिरीक सुखमात्रले तपाईको जीवनको सार्थकता पुरा भयो होला त? शरिरमात्र महत्वपुर्ण हुने भए मरेको शरिरमा किन जीवन हुदैन। तपाई त भित्र हुनुहुन्थ्यो, शरिर त केवल भाँडो मात्र हो। बुझ्न जरुरी छ।